Tag: vhidhiyo ads | Martech Zone
Clipcentric: Rich Media uye Vhidhiyo Ad Kubata Management
Chipiri, July 4, 2017 Mugovera, July 8, 2017 Douglas Karr
Clipcentric inopa vashandisi vayo sarudzo yakasarudzika yezvishandiso uye matemplate anopa kutonga kwakazara pane ese nhanho yekugadzira maitiro zvichikonzera kunyatsoteerera muchinjika-chikuva chakapfuma midhiya kushambadzira. Zvikwata zveAdhi zvinogona kukurumidza kugadzira uye kukudziridza zvinesimba HTML5 kushambadza zvinomhanya zvisina mushe chero munzvimbo. Dhonza-uye-Kudonhedza Nzvimbo Yekushandira - Intuitively kudhonza uye kudonhedza ad zvikamu mumidziyo-yakatarwa nzvimbo dzebasa rekutonga kwakazara, uye uko izvo zvaunoona ndizvo zvaunowana. Yakasimba HTML5 Kunyora - Gadzira
Iyo nharembozha nzvimbo inokwikwidza uye mazuva ekugadzira app, kubhadharisa madhora mashoma, uye kutarisira kuwana kudzoka kwako mukudyara iri kumashure kwedu mumaindasitiri mazhinji. Nekudaro, mukutenga-mu-app uye kushambadzira kwe-mu-app kunoenderera mberi kubatsira kuita mari inoshamisa inodyara iyo mutambo uye nharembozha vanogadzira varikuisa mari. Vungle ndemumwe wevatungamiriri mune ino indasitiri, ichipa vaparidzi SDK yakasimba yeanopindirana evhidhiyo kushambadzira ku
Maitiro akakosha kana zvasvika kune yepamhepo kushambadzira kushambadzira uye kufona-kune-chiito saizi. Mitemo inogonesa kuburitswa senge kwedu kuenzanisa matemplate edu uye nekuona marongero acho achizogamuchira kushambadza uko vashambadzi vangave vakatogadzira nekuyedza pamambure. Iine Google Adwords iri yekushambadzira tenzi, iyo yekubhadhara-penya-kudzvanya kushambadzira kuita paGoogle kunoraira iyo indasitiri. Wepamusoro Kuita Masero Ekushambadza paGoogle Leaderboard - 728 pixels yakafara ne90 pixels akareba Hafu-Peji -
Chinopfuura chinopfuura hafu yezvose kushambadzira pamapeji evhidhiyo zvinoonekwa pawebhu, mamiriro akaoma kune vatengesi vanotarisira kutora mukana wekukura kwevhidhiyo kutarisisa pamidziyo. Hadzisi dzese nhau dzakaipa… kunyangwe vhidhiyo kushambadza iyo yaiteererwa zvishoma ichine simba. Google yakaongorora yavo DoubleClick, Google uye Youtube mapuratifomu ekushambadzira kuyedza kuona izvo zvinhu zvinobatsira kuona kutaridzika kweayo mavhidhiyo kushambadza. Chii